Pro-Mugabe Pastors Launch Prayers To Counter Mass Protests :: Zim Metro
Published: 2016 August 08 12:45:48 (9688 Views)
A UNION of church leaders under the #MyZimbabwePrayer banner is inviting clerics to the official launch of the campaign at the Rainbow Towers on Wednesday, in what maybe seen as a move to counter citizens' growing mass protests against President Robert Mugabe who is accused of failing to lead the country.
But a State paper said the holistic convocation which is scheduled between 10am and 1pm, is a call for church leaders to pray for the nation, Government and President Mugabe.
The Herald newspaper quoted one Reverend Sam Malunga of the Tehila Christian Network, who is also a co-chairperson of the #MyZimbabwePrayer initiative, urging all church leaders to attend the launch and gather to reverse stunts taken by pseudo clerics in detracting the nation.
"#MyZimbabwePrayer is a clarion call to clerics and religious technocrats to respond to a holistic convocation and gathering of church leaders for the sole purpose to pray for the nation, Government, Cabinet, Parliament and President Mugabe and the First Lady," he was quoted saying.
"I believe it is time for Zimbabweans to jealously guard their sovereignty and independence particularly at this time when we commemorate the Heroes Day holiday," he reportedly said.
Rev Malunga also admonished Zimbabweans to celebrate the Heroes Day with pride, remembering the contribution and sacrificial experience of fallen heroes and those living under the leadership of the icon and embodiment of Zimbabwe's revolution, President Mugabe.
"I urge Zimbabweans not to be triggered or to divert and to be misled from the priority of nation building to rebellion," he reportedly said.
"Zimbabweans should emulate His Excellency not only for being a political leader, but also for being a champion of moral value alongside his wife (Amai Grace Mugabe), a powerful and astute leader, exemplified by her noble activities in talking care of orphans," Rev Malunga is quoted saying.
Tags: #MyZimbabwePrayers, MugabeRule, Pastors,
Anonymous user 2016 August 08 13:40:12
Reverend Mahlangu and your evil comedian you going to hell.I feel sorry for idiots who go to your church.